यसकारण अबको अन्तिम बिकल्प पुनः मतगणना - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
यसकारण अबको अन्तिम बिकल्प पुनः मतगणना
बीस बर्षपछि बल्लतल्ल भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘कँही नभएको जात्रा भरतपुरमा’ देखिएको छ । निर्वाचनको सुरुवाती दिनदेखि नै चर्चामा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका मतगणनाको अन्त्यतिर बिस्फोट भएरै छाड्यो । प्रधानमन्त्री दाहालको गृह जिल्ला, प्रधानमन्त्री दाहालकै पुत्री रेणु दाहाल मेयरका प्रत्यासी, राजधानी काठमाडौ, पोखरा जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँ कांग्रेसलाई सुम्पेर भरतपुरमा काँग्रेससँगको गठबन्धन, कांग्रेस उम्मेदवारमाथि पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाको हष्तक्षेप आदि इत्यादि कारण पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ठाँउहरु मध्ये ‘सुपर डुपर’ हिट बन्यो भरतपुर ।
भरतपुर महानगरपालिका १९ को गणना सुरु गर्नुअघि माका गठबन्धनका उम्मेदवार रेणु दाहाल र एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीबीच ७८४ मतको अन्तर थियो । करिव ३९ सय मतान्तरमा रहेका ज्ञवाली करिव ७ सयमा झरिसकेका थिए । अघिल्लो दिनसम्म हजारको अन्तरमा हारजित हुने अनुमान भईरहे पनि त्यो दिन एक सयदेखि दुईसयको अन्तरले हारजित हुने आंकलन भईरहेको थियो । अघिल्लो दिनसम्म निराश माओवादी कार्यकर्ताहरुमा जितिने आश पलाउदै थिए । एमाले कार्यकर्ताहरु मतान्तर घट्दै गए पनि मतगणना हुन बाँकी वडा नं. २० बाट राम्रै मत आउने र जित्ने आशमा थिए । देश विदेश सबैतिर भरतपुरले तहल्का पिटिरहेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप बहस यतिधेरै चर्किएको थियो कि त्यही बहस रातारात बिस्फोट हुन पुग्यो ।
सबैभन्दा भरपर्दाे र बिश्वस्त मानिने स्थानीय प्रहरीका अनुसार भरतपुर मतगणनास्थलमा बाँदरीय प्रवृति देखा प¥यो । निर्वाचन अधिकृत पिसाव क्लियर गर्न बाहिर निस्केका बेला मतगणनास्थलमा हिसाव गडबड भयो । र आजसम्म के गर्ने भन्ने निक्र्याैल भएको छैन । निर्वाचन आयोगले बनाएको छानविन समितिले समेत भरपर्दाे प्रतिबेदन नबुझाएपछि यतिबेला आयोग र कामचलाउ सरकारको समेत तिव्र आलोचना भईरहेको छ ।बास्तवमै भन्नुपर्दा भरतपुरमा सुन्दै हाँसो लाग्ने, देख्दै लाज लाग्ने प्रवृति छरपष्ट भएको छ । भरतपुर प्रकरण झट्ट हेर्दा हारजितको बहस जस्तो देखिए पनि यो केवल हारजित मात्रै नभएर कतिपयका लागि प्रतिष्ठा र राजनीतिक भविष्यका लागि चलिरहेको दोहोरी र उन्माद हो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा भरतपुर प्रकरण ‘… भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेसरी आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । कतिसम्म देखिएका छन भने मान्छे नाङ्गो छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि उसलाई जवरजस्ती स्रोह श्रृंगारयुक्त भनेर प्रमाणित गर्ने कोसिस जारी छ । अहिले प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले र माका गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताबीच दोषारोपण गर्ने क्रम जारी छ । तर यो लाजमर्दाे र आकाश हेरेर थुक थुक्नु जस्तै हो । किनकी सोही दिन सबैभन्दा बिश्वासिलो मानिने स्थानीय स्रोत प्रहरीले घटनाबारे स्पष्ट बयान सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।
भोलिपल्ट आएको नेपाल प्रहरीको विज्ञप्तिबाट पनि थप छर्लङ्गै भईसकेको छ । प्रहरीकै भनाई अनुसार माओवादी भातृ संगठन वाइसिएलका दुई जना युवाहरुले जवरजस्ती बाँदर जसरी उफ्रेर मतपत्र च्यातेका थिए । उनीहरु तत्काल रंगेहात पक्राउ परेका छन जो अहिले रिहा भईसकेका छन । यति भइसक्दा पनि फेरि मतपत्र च्यातेको दोष अरुलाई लगाउनु भनेको साउनमा आँखा फुटेको गोरुले बाह्रैमास हरियो देखे जसरी आप्mनै पार्टी मात्रै सही देख्ने दृष्टिदोष भएकाहरु हुन ।
भरतपुरमा नेपाली कांग्रेस निरिह छ । पार्टीले नै हतकडी लगाइ दिएपछि भरतपुर कांग्रेससँग माओवादीको पछि पछि लाग्नुको बिकल्प रहेन । गठबन्धनलाई धक्का दिएर जित हात पार्ने एमालेको दाउ छ भने माओवादीलाई जसरी पनि जित्नु छ । गृह जिल्लाले पत्याउन नसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनाव लड्न कहिले रोल्पा, कहिले काठमाडौ त कहिले सिराहा भौतारिंदै वाक्कदिक्क बनेका छन तसर्थ पनि दाहाललाई गृह जिल्लामा टिक्न जसरी पनि भरतपुरमा जित्नैपर्ने आत्म दबाब छ । र त्यसका लागि दाहालले अर्वाै रुपैंया रकमानान्तर गरेर भरतपुरमा खन्याएका छन् । रकमानान्तरदेखि मतपत्र च्यातच्यूतसम्मका गतिविधि नियाल्दा माओवादीले भरतपुर जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद अंगालेको देखिन्छ ।
अन्तिम समयमा मतपत्र च्यातच्युत गर्नुका पछाडि हारिने मानसिकता हावी देखिन्छ । कानुन अनुसार अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुनु अघि मतपत्र कसैले कब्जा गरेमा मात्र पुनः मतदान गर्ने ब्यवस्था छ । यही कानूनी टेकोमा टेकेर माओवादीले पुनः मतदान गराउने नियतका साथ नै मतपत्र च्यातच्युत पारेको आंकलन गर्न गाह्रो पर्दैन । तर बास्तविकता के हो भने मतपत्र कब्जामा परेमा मात्रै पुनः मतदान गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । माओवादीले कानुनलाई नै टेकेर जुन अपराध गरेको छ त्यो कदापि सह्य र न्ययोचित हुँदैन । यदि कथमकदाचित निर्वाचन आयोगले नियमको छुद्र समातेर नियमानुसार भन्दै पुनः मतदानको निर्णय गर्याे भने त्यो कानूनबिरुद्धकै अपराध ठहरिनेछ ।
हरेक निर्णयका पछाडि ब्यवहारिकताको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । भर्खरै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको नेपालका लागि त झनै ब्यवहारिकता कुरामा ध्यान नदिई कुनै निर्णय गर्नै हुँदैन । भरतपुरको सन्दर्भमा पनि यो कुरा निकै ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि निर्वाचन आयोगले कानूनको छिद्र समाउदै पुनः मतदान प्रक्रियामा गयो भने त्यसले देशलाई द्धन्द्धतिर धकेलिने प्रवल सम्भावना छ ।
यो पटक माओवादीले मतपत्र च्यात्दा पुनः मतदान गर्याे भने अर्काेपटक फेरि अर्काे दलले मतपत्र च्यात्यो भने पुनः मतदानमा जान कर लाग्छ । यही रोग फैलिँदै गयो भने दोश्रो चरणको निर्वाचन कति युगसम्म गर्ने ? पार्टीका कार्यकर्ताले आफू हार्ने डरले मतपत्र च्यात्ने र आयोगले पुनः मतदान गर्दै जाने हो भने मुलुकको हालत के होला ? के यो सोचनीय बिषय होईन । पछिल्लो पटक देखिएको जो चोर उसकै ठूलो स्वर प्रवृति हेर्दा त च्यातिएको मतपत्र च्यात्ने पार्टीका नाममा गणना गरेर बाँकी मतपत्र मात्रै गणना गरी नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो चाहे त्यो जुनसुकै पार्टी किन नहोस् ।
अतः निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुरको मतगणना भईरहेको वडामा ९१ मत च्यातिएका छन । खसेको २८९७ मध्ये २८०७ मत सग्लो छन । जसमध्ये १८०९ मत गणना भईसकेका छन । तसर्थ अबको एउटै मात्र मध्यमार्गी र अन्तिम बिकल्प भनेको धमाधम मतगणना गर्नु नै हो । अन्त्यमा च्यातिएको ९१ मत भन्दा थोरैले हारजित हुने भयो भने पुनः मतदानको प्रक्रियामा जाने अन्यथा त्यो भन्दा बढी मतले हारजित हुने भयो भने नतिजा घोषणा गर्ने । यो नै अति उत्तम, ब्यवहारिक र अन्तिम बिकल्प हो जसले मुलुकमा रोग पल्किने सम्भावना रहदैन । भविष्यलाई आधारस्तम्भ समेत तय हुन्छ ।